ဒီနှစ် Golden Foot ဆု ဘယ်သူရသွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Golden Foot ဆုကို ဘယ်သူ ရရှိသွားမလဲ
16 Oct 2018 . 12:11 PM
Golden Foot (ရွှေခြေဖ၀ါး)ဆု ဆိုတာက ဘောလုံးလောကမှာ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားတဲ့ ဆုတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ ဒီဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းရွေးချယ်ရာမှာ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ အားကစားဂျာနယ်လစ်တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းအတိုင်း ရွေးချယ်ပြီး Online Voting ကနေ မဲအများဆုံးရတဲ့သူကို ဆုချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်တွေကတော့ ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ရွေးချယ်မယ့် ကစားသမားဟာ အနည်းဆုံးအသက်(၂၈)နှစ်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး ဘောလုံးလောကမှာ လက်ရှိကစားနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်၊ ပြီးတော့ တစ်ဦးချင်း၊ အသင်းလိုက်အောင်မြင်မှုသာမက ကွင်းပြင်ပမှာလည်း Personality ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီဆုကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထူးခြားချက်ကတော့ ဆုရရှိသူဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆုရရှိသူရဲ့ ခြေဖ၀ါးပုံတူကို မိုနာကိုနိုင်ငံက The Champions Promenade ရှေ့မှာ တစ်သက်တာ ထားရှိသွားမှာပါ။
၂၀၁၈ ခုနှစ် Golden Foot ဆုအတွက် ဆန်ခါတင် (၁၀)ဦးစာရင်းက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေ တော်တော်များများ ပါဝင်နေလို့ ဘယ်သူ ဆွတ်ခူးမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဒီဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေက နူအာ Manuel Neuer ၊ မက်ဆီ Lionel Messi ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ၊ လူးဝစ်ဆွာရက်ဇ် Luis Suarez ၊ ကာဗာနီ Edinson Cavani ၊ ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale ၊ ရာမို့စ် Sergio Ramos ၊ လီဝန်ဒေါစကီး Robert Lewandowski ၊ အဂွဲရိုး Sergio Aguero ၊ သီယာဂိုဆေးလ်ဗား Thiago Silva တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရရှိဖို့ ရေပန်းစားနေတာက လေက်ရှိ ဘောလုံးလောကရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက်(၂)ဦးဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ဦးထဲက ဘယ်သူရမလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားနာမည်ကျော် ကစားသမားတစ်ဦးဦးကပဲ ကျော်ဖြတ် ရယူသွားမလားဆိုတာ . . .
၂၀၁၈ Golden Foot ဆု ဆန်ခါတင်စာရင်း
Golden Foot ဆု ရရှိခဲ့ကြသူများ
2004 Pavel Nedvěd (Czech Republic, Juventus)
2012 Zlatan Ibrahimović (Sweden, PSG)
2015 Samuel Eto’o (Cameroon, Antalyaspor)
၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျ Golden Foot ဆုကို ဘယျသူ ရရှိသှားမလဲ
Golden Foot (ရှခွေဖေဝါး)ဆု ဆိုတာက ဘောလုံးလောကမှာ ဂုဏျသိက်ခာမွငျ့မားတဲ့ ဆုတှထေဲမှာ တဈခုအပါအဝငျပါပဲ။ ဒီဆုအတှကျ ဆနျခါတငျစာရငျးရှေးခယျြရာမှာ နိုငျငံတကာမှာရှိတဲ့ အားကစားဂြာနယျလဈတှကေ သတျမှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးအတိုငျး ရှေးခယျြပွီး Online Voting ကနေ မဲအမြားဆုံးရတဲ့သူကို ဆုခြီးမွှငျ့တာဖွဈပါတယျ။ စညျးကမျးခကျြတှကေတော့ ဆနျခါတငျစာရငျးမှာ ရှေးခယျြမယျ့ ကစားသမားဟာ အနညျးဆုံးအသကျ(၂၈)နှဈရှိရမှာဖွဈပွီး ဘောလုံးလောကမှာ လကျရှိကစားနတေဲ့သူဖွဈရမယျ၊ ပွီးတော့ တဈဦးခငျြး၊ အသငျးလိုကျအောငျမွငျမှုသာမက ကှငျးပွငျပမှာလညျး Personality ကောငျးမှနျသူဖွဈရပါမယျ။ ဒီဆုကို ၂၀၀၃ ခုနှဈကတညျးက စတငျခြီးမွှငျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး ထူးခွားခကျြကတော့ ဆုရရှိသူဟာ နောကျတဈကွိမျ ပွနျရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဆုရရှိသူရဲ့ ခွဖေဝါးပုံတူကို မိုနာကိုနိုငျငံက The Champions Promenade ရှမှေ့ာ တဈသကျတာ ထားရှိသှားမှာပါ။
၂၀၁၈ ခုနှဈ Golden Foot ဆုအတှကျ ဆနျခါတငျ (၁၀)ဦးစာရငျးက ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက ထှကျပျေါလာခဲ့ပွီး နာမညျကွီး ကစားသမားတှေ တျောတျောမြားမြား ပါဝငျနလေို့ ဘယျသူ ဆှတျခူးမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ ဒီဆုအတှကျ ဆနျခါတငျစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့သူတှကေ နူအာ Manuel Neuer ၊ မကျဆီ Lionel Messi ၊ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ၊ လူးဝဈဆှာရကျဇျ Luis Suarez ၊ ကာဗာနီ Edinson Cavani ၊ ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale ၊ ရာမို့ဈ Sergio Ramos ၊ လီဝနျဒေါစကီး Robert Lewandowski ၊ အဂှဲရိုး Sergio Aguero ၊ သီယာဂိုဆေးလျဗား Thiago Silva တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဆုရရှိဖို့ ရပေနျးစားနတောက လကျေရှိ ဘောလုံးလောကရဲ့ အဓိက ပွိုငျဘကျ(၂)ဦးဖွဈတဲ့ မကျဆီ၊ စီရျောနယျလျဒိုတို့ဖွဈပွီး သူတို့နှဈဦးထဲက ဘယျသူရမလဲ၊ ဒါမှမဟုတျ တခွားနာမညျကြျော ကစားသမားတဈဦးဦးကပဲ ကြျောဖွတျ ရယူသှားမလားဆိုတာ . . .
၂၀၁၈ Golden Foot ဆု ဆနျခါတငျစာရငျး
Golden Foot ဆု ရရှိခဲ့ကွသူမြား